Homeसमाचार‘भ्वाइस अफ नेपाल’मा जजनै रुन थालेपछि चल्यो स्टेजमा रुवाबासी , के भयो आज यस्तो ? हेरौ (भिडियो सहित)
April 2, 2021 admin समाचार 5808
‘दि भ्वाइस अफ नेपाल सिजन–३’ को डिजिटल अ’डिसन सुरु भएको छ । नेपालको नम्बर एक गायन रियालिटी शोको रुपमा स्थापित भइसकेको ‘दि भ्वाइस अफ नेपाल’ हिमालय टेलिभि’जनले उत्पादन र प्रसा’रण गर्दै आएको छ । नेपाली टेलिभिजन रियालिटी शोका सवैजसो रेकर्ड तोड्दै ‘दि भ्वाइस अफ नेपाल–२’ले करोडौं नेपालीको मन जि’तेको थियो ।
यो शोको तेस्रो सिजनका लागि शनिवारबाट डिजिटल अडिसन सुरु गरिएको हो । १६ बर्ष उमेर पुगेका यूवायूवतीदेखि ४५ बर्षसम्मका प्रतिभाहरुले यो रियालि’टी शोमा भाग लिन पाउनेछन् । डिजिटल अडिस’नमार्फत् आफ्नो गीतको भि’डियो रेकर्ड पठाई आवेदन दिन सकिनेछ ।
नेपाली गीत सं’गीतको सबैको प्रिय कार्यक्रम बनेको एक मात्र चर्चित रियालिटी सो दि भोइस अफ नेपाल’को आजको कार्यक्रमको सुरुवातमै जजहरुको रुवाबासी चलेको छ। एक्का’सी गायक राजु लामा रुन थालेपछि संगै बरिष्ठ गायक तथा सर्जक दिप श्रेष्ठ रुन पुगेका थिए। दिप श्रेष्ठले पुरानो गीत गाएपछि राजुको आँखामा आँसु भरि’एको थियो।
राजु लामालेनै जब’र्जस्ति दिप् श्रेष्ठलाई उक्त गीत गाउन लगाएका थिए। निकै रूहाउने कहानी जोडिएको गीतले राजुको मन छोयो जसको कारण स्टेजनै सुन्य भयो सबैलाई केहि समय भा’बुक बनायो। एता प्रमोद खरेल पनि भाबुक भए’का थिए। यो बेला युटुबमा सर्बाधिक हेरिने कार्यक्रम बनेको छ दि भोइस अफ नेपाल। हिमालयन टेलिभिजनले प्रशारण गर्ने उक्त कार्यक्रम दि भोइस अफ नेपालकै युटुब च्यानल मार्फत सार्बज’निक हुने गर्दछ।
सिजन ३ को ५ औं भा’गमा यो बेला सबैलाई रूहाउने भाग बनेको छ। अन्य कला’कारहरु जो सहभागी भएका छन सबैको आँखा रसाएका छन।केहि न केहि नया कुराले सबै’लाई छोएको छ। यो हप्ताको दि भोइस अफ नेपाल कस्तो छ ? हेरौ
सेफोक्सुण्डो ताल पुगेर एउटै ब्ल्याङ्केट भित्र अनमोल र सुहाना (भिडियो हे’र्नुहोस)
सडक दुर्घ’टनामा परेर गम्भीर घा’इते भएकी, मोडल निशा फेरी अस्पताल भर्ना
June 10, 2021 admin समाचार 5415
मोडल निशा घिमिरे थापा’थलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएकी छिन् । गत वर्ष भारतको देहरादुनमा सडक दुर्घ’टनामा परेर ग’म्भीर घा’इते भएकी मोडल निशाको लामो समय काठमाडौंको ट्रमा सेन्टरमा उपचार गरिएको र अहिले फेरी नर्भि’कमा उपचार सुरु
March 2, 2021 admin समाचार 5518
March 6, 2021 admin समाचार 5900
नेपालका युवा र नेदरल्या’ण्डकी युवतीबीचको प्रेम र विवाह पछि यिनीह’रुको जोडी अहिले निकै चर्चीत भएको छ । नेदल्या’ण्डकी यि युवती निकै राम्रो नेपाली बोल्छिन् । पाँच वर्ष अघि यिनीहरुको विवाह भएको हो। उनी नेपाली युवा’संग